ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်) ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များ (၁) | Myanmar Mp3 Album
Home / 2010 / September / 16 / ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်) ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များ (၁)
ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်) ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များ (၁)
မူလလင့်ကိုဖေါ်ပြထားပေမယ့် တင်ထားတဲ့ဖိုင်များကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသူMMA တရားနာပရိတ်သတ်
အများအပြား Down Load ဆွဲကြသည့်အတွက် ဓမ္မဒါန ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်ခြင်းကို
၀မ်းသာပီတိဖြစ်မိပါသည်။ MMA တရားနာပရိတ်သတ်များ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်း သာကြပါစေ။
01 ။ သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်အပိုင်း(၁)
02 ။ သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်အပိုင်း(၂)
03 ။ သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်အပိုင်း(၃)
04 ။ သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်အပိုင်း(၄)
05 ။ သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်အပိုင်း(၅)
06 ။ သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်အပိုင်း(၆)
07 ။ သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်အပိုင်း(၇)
08 ။ သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်အပိုင်း(၈)
09 ။ သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်အပိုင်း(၉)
10 ။ သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်အပိုင်း(၁၀)
11 ။ သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်အပိုင်း(၁၁)
12 ။ သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်အပိုင်း(၁၂)
13 ။ သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်အပိုင်း(၁၃)
14 ။ သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်အပိုင်း(၁၄)
15 ။ သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်အပိုင်း(၁၅)
16 ။ သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်အပိုင်း(၁၆)
” MMA ရဲ့ကုသိုလ် ”
September 16, 2010 Yee Wai Aung ဦူးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်) တရားတော်အခွေများ UThuMinGaLa 12 Comments
12 thoughts on “ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်) ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များ (၁)”
ကျေးဇူးပါပဲ တရားတော်များကို အားလုံးဒေါင်းသွားလိုက်မယ်နော်……..
ဒယ်အိုးတရားတွေ(၅၁၅)ပုဒ်တောင်ဒေါင်းလို့ရသာမက ၊တခြားဆရာတော်တွေရဲ့တရားတွေကိုပါဒေါင်းလို့ရတယ်နေရာက- http://www.dhammadownload.com/AudioInMyanmar.htm ပဲနော်…ကြုံလို့ပြောတာ….. အကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့— အကြောင်းစင်ကြယ်ရင်အကျိုးစင်ကြယ်တာပေါ့…… စိုင်းလေး
ကို ASAI ပြောတဲ့လင့်ကို ပြီးခဲ့တဲ့လ (၂၈)နေ့ရက်စွဲနဲ့ အောက်မှာပေးထားတဲ့လင့်မှာကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
တရားတော်များနာကြားနိုင်ရန် – ဓမ္မဒါန(၁)
by Yee Wai Aung on August 28, 2010
in Media, တရားတော်အခွေများ
တရားတော်များနာကြားနိုင်ရန် – ဓမ္မဒါန(၂)
တင်ထားတဲ့လင့်မှာလည်း ” ထပ်ဆင့်ဒါန ” လို့ Credit ပေးထားပါသေးတယ်။
အဲဒီလိုတင်ပေးထားတဲ့ကြားက တစ်ချို့ MMA ပရိတ်သတ်တွေ က ( MMA
အပင်ပန်းခံပြီး၊ အချိန်ကုန်ခံပြီး အလုပ်အားတဲ့အချိန်လေး ရည်ရွယ်ချက်စင်စင်ကြယ်ကြယ်နဲ့ဓမ္မဒါနလုပ်ပေးတာပါ။
ကျေးဇူးပါ ခုလို ရှာဖွေစုဆောင်းပြီး ကိုယ်ကျိုးမပါပဲ တရားတွေကို တစ်စုတည်း နာနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးတဲ့ အကို ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် သူ့ထက်ငါသိတယ် ငါတတ်တယ်လို့သဘောမထားပဲ စေတနာသန့်သန့်နဲ့ ပို့ပေးတဲ့ အကို တကယ့်ကိုကျေးဇူးပါ
ထာဝရ အားပေးလျှက် ပါ…..။
အခုလိုတရားခွေတွေတင်ထားပေးတာကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် —– တရားခွေတွေ ဒေါင်းလိုက်တယ် နော်
ဘယ်လို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရတာလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါလား KeyS.. ထဲမှာ ထည့်ပြီး တရားနာချင်လို့ ပါ
တရားတော်ကိုတင်ပေးတဲ့လူရော ဝက်ဆိုက်ပေးတဲ့လူရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ……
ကျေးဇူး အထူးအထူး တင်ပါသည် ရှင့်….
ရပ်ဝေးမြေခြားမှာနေရတဲ့ဘဝက အခုလိုတရားဓမ္မတွေ တင်ပေးထားတာတွေ့ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာအာရဖြစ်မိပါတယ် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်
ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေ အတွက် http://www.dhammavideo.com မှာလဲပဲ ဗီဒီယိုများကို ကြည့်လို့ရပါတယ်…. internet connection ကောင်းရင်တော့ ကြည့်လို့ရမယ်။ မကောင်းရင်တော့ download လုပ်လို့လဲရတယ်… DOWNLOAD VIDEO ဆိုတဲ့နေရာကို ကလစ်လိုက်ရင် ဒေါင်းလို့ရတယ် မြန်သာပဲလို့ပြောရမလားပဲ…
mediafire တို့ ifile တို့ထက်မြန်မယ်ထင်တယ်…
http://www.myanmarmp3album.com က admin လဲပဲ အဲဒီက link ယူပြီး တဆင့် share ပေးလို့ရမှာပါ….
admin ကြီးကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…